जितु नेपाललाई प्रश्न- 'मुन्द्रेको क्लब' अब आउँदैन ? - Jagaran Post
Jagaran Post २१ चैत्र २०७८, सोमबार १२:३९
हास्य कलाकार जितु नेपालको ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द भएको पाँच महिना पुगिसक्यो । १ सय ३२ भागसम्म पुगेर बन्द भएको उक्त कार्यक्रमको सिजन-२ ल्याउने तयारीमा थिए, जितु । तीन महिनाअघि जितुले कार्यक्रमको निर्देशकका रूपमा निदेश डिसीलाई भित्र्याए । ‘टेलिभिजनहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । अब केही दिनमै कार्यक्रम कहिलेबाट आउँछ घोषणा गर्नेछु,’ जितुले भनेका थिए ।
फरक विषयवस्तु, नयाँ सदस्य र नयाँ सेटमा मुन्द्रेको कमेडी क्लब आउँछ ।
तर, उस्तै किसिमको डिजाइनमा कमेडी च्याम्पियनका प्रतिस्पर्धीलाई लिएर ‘कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन’ केही दिनअघिबाट प्रसारण भयो । ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’कै कलाकर पनि उक्त कार्यक्रममा थिए । कि इन्टरटेन्मेन्टले नै ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ निर्माण गरेको थियो ।
जितुसँग असमझदारी बढेपछि कार्यक्रम बन्द हुन पुगेको थियो । र, अहिले कि र थ्रि प्रडक्सनले उही शैलीका कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिरहेका छन् । यतिबेला जितुलाई भने कार्यक्रम कहिले आउँछ भन्दै फोन, म्यासेजमार्फत र शुभचिन्तकहरूले चासो राखिरहेका छन् । ‘अब चाँडै नै आउँछ । फरक विषयवस्तु, नयाँ सदस्य र नयाँ सेटमा मुन्द्रेको कमेडी क्लब आउँछ । हामी यसको तयारीमा छौँ । चाँडै नै नयाँ प्रोमोसहित जानकारी दिनेछौँ । फोन गरेर चासो लिनु भएकोमा धन्यवाद,’ जितुले भनेका छन् ।
उनको फेसबुक स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेहरूले आफूहरू कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहेको बताएका थिए । ‘कार्यक्रम ढिला हुन के ले रोक्यो त ?’ शिलापत्रले जितुसँग कुराकानी गरेको छ :
जितुजी, कार्यक्रम आउँछ मात्र भन्नुहुन्छ । तर, चार-पाँच महिना भइसक्यो । किन ढिला गर्नुभयो ?
म पछिल्लो समय चलिचत्रको सुटिङमा व्यस्त भएँ ।बल्ल सुटिङ सकियो । ढिला हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । अहिले त्यो फिल्मको पोस्ट प्रोडक्सनको काम भइरहेको छ । अर्कोचाहिँ कुन टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने भन्ने कुरा अलमल भएर हो । एजेन्सीसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । टेलिभिजनकै खोजीले गर्दा पनि समय बित्यो ।
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द भएपछि कार्यक्रमप्रति चासो राख्नेहरू कतिको पाउनुभयो ?
ओहो ! चासो राख्नेहरू एकदमै धेरै पाएँ । मलाई त लाग्थ्यो कार्यक्रम कसले हेर्ला र ! सामाजिक सञ्जालका कुरा बढी सुन्ने बानी । तर, जब म बाहिर गएँ, मेरो कार्यक्रम हेर्ने थुप्रो हुनुहुँदोरहेछ । उहाँहरूमा कार्यक्रम कहिले आउँछ भन्ने प्रतीक्षा रहेछ । एक जना डाक्टरसाप भेटेँ । उहाँले यति प्रोत्साहन गर्नुभयो कि कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोगसम्म गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
मुन्द्रेको कमेडी क्लबको पहिलो सिजनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
छु । कार्यक्रमले धेरैलाई रोजगारी दियो । चर्चा पायो । नयाँ कलाकार जन्मायो । उनीहरूलाई स्थापित गरायो । यो त मेरो लागि खुसीको कुरा हो नि ।
तर, तपाईंको कार्यक्रमलाई त ‘द कपिल शर्मा शो को’ कपिपेस्ट भनेर टिप्पणी पनि गरियो नि ?
पहिलो कुरा त यो किसिमको कार्यक्रम ल्याउनु ठूलो कुरा थियो । कपिल शर्माको कपी भन्छन् । तर, हामीसँग सुविधा कति छ ? हाम्रो आफ्नै सीमितता छ । हाम्रो कमजोरी मात्र हेरिन्छ तर राम्रो कार्यक्रमका लागि त्यही किसिमको सेट लगानी चाहिन्छ ।
यहाँ त नेपाली सेलिब्रेटीलाई नउडाइकन, विवादमा नपारिकन हुँदैन । मेरो कार्यक्रम बन्द हुँदा चाहिन्छ भन्ने पनि कोही भएन । हामी नेतालाई व्यंग्य गर्छौं । तर, हाम्रो क्षेत्रमा पनि यो स्वभाव कम छैन । हामी जे कुरा पनि हिन्दीसँग तुलना गर्छौं । उसोभए एकसेएक कार्यक्रम हिन्दीमा आउँछ नेपाली कार्यक्रम किन चाहियो त ? भलै हाम्रा कमजोरीका पाटा पनि धेरै छन् । तर, त्यसलाई सुधारेर नेपाली कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो नि ।
उसोभए नयाँ कार्यक्रमका लागि टेलिभिजन र एजेन्सीसँग सम्झौता कहिलेसम्म हुन्छ ?
दुई-तीनवटासँग कुरा भएको छ । दुई-तीन दिनभित्रै टुंगो लाग्छ ।
तपाईं नयाँपन लिएर आउँदैछु भन्नुहुन्छ । नयाँपनचाहिँ के ल्याउनुहुन्छ ?
यही फर्म्याटका अन्य कार्यक्रम पनि आइरहेका छन् । फेरि फर्म्याटबाट तलमाथि गएँ भने अर्कोसँग मिल्न जान्छ । कार्यक्रम अतिथिबेस नै हुनेछ । मेरो सोचमा अब अतिथि सहभागितामा फरकपन ल्याऊँ । पात्र मबाहेक सबै नयाँ हुन्छन् । कार्यक्रम नाटकबेसमा हुन्छ । अनि एक दुईवटा सरप्राइज पनि छन् ।
पहिलेको कार्यक्रमको के कुराचाहिँ दोहोर्‍याउँदिनँ जस्तो लागेको छ । जुन आत्मसमीक्षा गर्दा पनि कमजोरी हो जस्तो लागे ?
मैले पहिलेको कार्यक्रमबाट धेरै कुरा सिकेँ । अघिल्ला दिनमा पनि मैले काम गरेको हुँ । तर, म व्यवस्थापनमा चुकेजस्तो लाग्थेन । ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ मा म अलमलिए । मलाई साथ दिने टिम भएन । एकैदिन तीन-चार भाग गर्ने बाध्यता थियो ।
स्क्रिप्ट लेख्ने छुट्टै मान्छे थिएन, निर्देशक थिएनन् । तर, अब त रिसर्च गर्ने टिम, स्क्रिप्ट लेख्ने पनि फरक हुन्छन् । निर्देशक दिनेश डिसी हुनुहुन्छ । अघिल्लो श्रृंखलाका कमजोरी दोहोर्‍याउँदिनँ । आधा स्क्रिप्ट र आधा अन द स्पट कमेडीको आधार मेरो कार्यक्रमको हुनेछ ।